Logoka Universal - Diidmada Video
DJ video intro ee qaabka calaamadda Universal. Cimilo caadi ah, madadaalo ah ayaa dareensan in dib loo sawiray magacaaga DJ iyo qoraallada gaarka ah. Fiidiyoogan DJ waa inuu hubiyaa inuu dareenka ku qabsado. Aad u weyn sida DJ intro bilowga ama qorshahaaga, inaad xirto habeenkii ama, heck, midigta dhexe. Sida muuqaalkeena oo dhan DJ dhibcaha iyo DJ videos waa tifaftiri, tayo sare, video High Definition video. ADD caado ama lab ama dhedig qayb ahaan sawir fiidiyoow loogu talagalay kaliya $ 50